Trenitalia Train Tiketi na Ahịa Ego | Save A Train
Trenitalia Train Tiketi na Ahịa Ego
Home > Trenitalia Train Tiketi na Ahịa Ego
You nwere ike ịchọta ozi niile gbasara Trenitalia ụgbọ oloko dị ọnụ ala na Ọnụ ego njem Trenitalia na uru.
isiokwu: 1. Trenitalia site na Train Isi
2. Banyere Trenitalia 3. Nleta di elu iji nweta Trenitalia Train Tiketi di otutu
4. Ego ole tiketi Trenitalia na-eri 5. Rozọ Njem: Gịnị mere o ji dị mma iji Trenitalia, gharakwa njem ụgbọelu
6. Kedu ihe dị iche n'etiti Standard Economy, Ebere, Azụmaahịa na Executive na Trenitalia 7. Enwere ndenye aha Trenitalia
8. Ogologo oge tupu ọpụpụ nke Trenitalia rute 9. Gịnị bụ oge ụgbọ oloko Trenitalia
10. Kedu ụlọ ọrụ Trenitalia na-eje 11. Trenitalia FAQ
Trenitalia site na Train Isi
Emere ụlọ ọrụ Trenitalia na 1 nke June 2000.
na 2005, na Frecciarossa 1000, Emere uzo uzo uzo uzo Trenitalia nke ngwa ngwa. Ọsọ ọsọ nke Frecciarossa 1000 na-eru 300km kwa elekere.
Trainzọ ụgbọ oloko nke International International dị n'etiti Geneva na Milan ọ ga-ewe 4 awa na Trenitalia.
Trenitalia na-arụ ọrụ ogologo ụgbọ oloko na njikọta ya na ụgbọ oloko mpaghara ruo ebe ọ bụla n'Italytali.
Trenitalia ụgbọ oloko dị elu bụ ọrụ jikọtara ebe ugwu na ndịda na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ na Itali yana Italytali na Switzerland, France, Austria, na Germany.
The ụgbọ oloko trenitalia ị na-agagharị n'okporo ụzọ ụgbọ elu dị ọsọ 3km kwa awa.
Naanị 3 awa ole ị ga - esi na Milan ruo Rome na site na Milan ruo Bologna na 1 hour.
gaa Chekwaa Homepage Train ma ọ bụ jiri wijetị a chọọ na-azụ tiketi maka Trenitalia
Nleta di elu iji nweta Trenitalia Train Tiketi di otutu
Number 1: Detuo tiketi Trenitalia gị tupu ị nwere ike
Trenitalia tiketi dị n'etiti 2 ka 4 ọnwa tupu ụbọchị ọpụpụ. Iburu tiketi Trenitalia na-ekwe nkwa na ị ga-enweta tiketi dị ọnụ ala karịa nke pere mpe. Ticketsgbọ oloko na-agbago ọnụahịa ka ị na-abịaru nso ụbọchị njem, ya mere iji chekwaa ego na zụta tiketi ụgbọ oloko gị, ịtụ dị ka o kwere mee tupu oge ọ bụla.
Number 2: Njem nke Trenitalia mere na oge adighi nma
Trenitalia tiketi dị ọnụ ala karịa n'oge elekere kachasị mma, na mbido izu, na n'etiti ehihie na etiti izu izu njem ụgbọ (Tuzdee, Wenezde, na Tọzdee) na-enyekarị ọnụahịa dị ọnụ ala. Maka ọnụahịa kachasị mma, ebula ụgbọ oloko Trenitalia n'isi ụtụtụ na n'isi mgbede n'izu (n'ihi ọtụtụ ndị njem na-azụ ahịa). Zere ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịkpọ ụgbọ okporo ígwè Trenitalia na mgbede Fraịde na Sọnde (mma maka ngwụsị izu) na mgbe ezumike ọha na eze n’oge ezumike ụlọ akwụkwọ n'ihi na n'oge ememe ndị a, ọnụahịa Trenitalia na-akwụ elu igwe.
Number 3: Denye tiketi maka Trenitalia mgbe ijiri usoro nhazi njem gị
Ọrụ ụgbọ oloko Trenitalia nwere nnukwu ihe achọrọ. Trenitalia Base train ticket can be exchanged and modified without limitation and Economy Standard ticket can only be modified once before the train departure date. You cannot exchange or refund the other Trenitalia tickets, mana enwere nzukọ na ịntanetị ị nwere ike ree tiketi Trenitalia nke abụọ. Dokwaa nkwanye ụgbọ oloko maka Njem Trenitalia bụ akwụkwọ mgbe ị ji n'aka na usoro njem gị.
Number 4: Zụta tiketi Trenitalia gị na Save A Train
Chekwaa Tragbọ Agbọala nwere onyinye kasịnụ nke tiketi ụgbọ elu na Europe na ụwa niile, anyị na-ahụ tiketi Trenitalia dị ọnụ ala. Anyị jikọtara na ọtụtụ ndị na-anya ụgbọ okporo ígwè na algọridim anyị na-enye gị tiketi Trenitalia dị ọnụ ala mgbe niile na ngwakọta nke ndị na-anya ụgbọ okporo ígwè gaa ebe ndị ọzọ.. Anyị nwekwara ike ịchọta ụzọ ọzọ na ụgbọ oloko Trenitalia.
Ego ole tiketi Trenitalia na-eri?
Ọnụahịa tiketi Trenitalia dịka ọmụmaatụ nwere ike ịmalite na € 21 na oge nkwalite mana ọ nwere ike iru € 97 na nkeji ikpeazụ. Ahịa Trenitalia dabere na klaasị ị họọrọ na ebe a bụ okpokoro nchịkọta nke ọnụego ọnụego ọnụego otu klaasị maka Rome-Naples / Rome – Milan / Milan – Florence na-eme njem ụgbọ oloko:
Ọkọlọtọ 21 € – 70 € 40 € – 130 €
Ebere 42 € – 90 € 78 € – 172 €
Rozọ Njem: Gịnị mere o ji dị mma iji Trenitalia, gharakwa njem ụgbọelu?
1) Ihe nke Trenitalia ụgbọ oloko na-amalite na eziokwu na i nwere ike apụ na-abata ozugbo na etiti obodo ọ bụla nke obodo na ị na-njem si. O doro anya na nke a bụ ihe dị iche na ụgbọ oloko, karịsịa ma ọ bụrụ na ị zụọ njem si Rome, Milan, Florence, Geneva, ma ọ bụ Monaco, ọ bụ nnukwu uru maka Trenitalia. N'ihi eziokwu a na njem ahụ bụ nke etiti obodo, ị ga-ezere nsogbu okporo ụzọ na ọnweghị ihe kacha njọ karịa ịnọgidesi ike na okporo ụzọ ezumike.
Mgbe ọ bịakwutere Trenitalia tiketi ụgbọ elu pricing, ọnụahịa na-adịkarị iche. Tionsfọdụ n'ọkwa na-enye gị ohere inweta tiketi ụgbọ oloko dị ọnụ ala, ma n’oge ikpeaz ụ tupu ọpụpụ, na ahịa na-na-elu ma ọ bụrụ na-amasị gị ezigbo ejegharị, Trenitalia bụ maka gị!
2) Ga njem ụgbọelu nwere usoro nchekwa ọdụ ụgbọ elu. Nke a pụtara na ị ga-enwerịrị opekata mpe 2 elekere tupu njem ịghachị. Mụ na Trenitalia, needkwesịrị ịbịarute 30 Nkeji oge. Ọzọkwa, have ga-eji ụgbọ elu gafere site na etiti obodo. Ya mere, ọ bụrụ na ị gụọ oge njem niile, Trenitalia na-emeri oge niile na njem niile yana ọnụahịa ma ọ bụrụ na ị gbakọọ oge gị dịka ego.
3) Mgbe ụfọdụ ọnụahịa Trenitalia dị elu karịa site na ụgbọ elu na ọnụ ahịa ihu tiketi, mana ntụnyere ahụ kwesịrị ịgụnye ego ole ọ ga-ewe gị iji were ụgbọ njem ọ bụla n'ọdụ ụgbọ elu. E wezụga, na ụfọdụ, ị na-enwetakwa oge ezumike mgbe njem ụgbọ oloko na Trenitalia na nke ikpeazu ya na Trenitalia, fees nweghị ụgwọ akpa akwa.
4) Egbu, Plangbọ elu bụ otu n’ime ihe kpatara ikuku ikuku, na eji atụnyere, Trenitalia ụgbọ oloko bụ ọtụtụ ndị ọzọ gburugburu ebe obibi enyi na enyi, ma ọ bụrụ na i jiri ụgbọ elu atụnyere njem ụgbọ oloko, Njem ụgbọ oloko dị obere ikuku ikuku 20x karịa ikuku ụgbọ elu.
Kedu ihe dị iche n'etiti Standard Economy, Ebere, Business, na Executive na Trenitalia?
Trenitalia na-enye ọtụtụ ọrụ klaasị ụgbọ oloko a rụrụ maka mmefu ego na ụdị njem ọ bụla, ma ị bụ onye njem azụmahịa, oge ntụrụndụ, ma obu ha abuo.
Isi ihe dị iche n'etiti klaasị tiketi ụgbọ elu Trenitalia bụ enweghị mgbanwe nke mgbanwe tiketi, ahịa, na ọrụ. Ọzọkwa a ọkọlọtọ Economy ụgbọ okporo ígwè tiketi bụ dị ọnụ ala ma na-kasị mgbanwe ụzọ njem na Italy.
Tikitalia Economy Trenitalia Standard:
Na Trenitalia Ọdụ ụgbọ okporo ígwè Standard Economy bụ ọnụ ala karịa ego ụgbọ mmiri Trenitalia niile. Ọ kachasị mma itinye tiketi ụgbọ oloko a tupu oge eruo, n'ihi na isi tiketi ala price – ha na-ere ngwa ngwa. Ndị njem na-ejigide ọkọlọtọ ụgbọ okporo ọkọlọtọ nwere ike ịnwe akpa ha dabara na akpa ha, n'ihi na free na ike ịkagbu ha ụgbọ okporo ígwè tiketi tupu ọpụpụ na-enweta a ele mmadụ anya n'ihu nkwụghachi (nwepu ụgwọ nke 20%).
Trenitalia Ahịa Tiketị Ego Ego:
Ticketlọ tiketi ụgbọ oloko a dị oke ọnụ karịa ụdị tiketi Trenitalia, na Economy Trenitalia adịchaghị tiketi na-enye ndị ọzọ ọrụ. Ticketdị ụgbọ oloko a dị na Trenitalia nke na-agba oke ọsọ ma na-enye ohere mgbanwe oge na ụbọchị naanị otu ugboro tupu ụbọchị ọpụpụ..
Na mgbakwunye na uru nke tiketi ụgbọ oloko Standard, Trenitalia Economy Premium Tiketi na-enye oche dị mma karịa nke nwere ụkwụ na-ezighi ezi na oche na-ehi ụra na njem ndị dị anya. Karịsịa ihe nile, enwere nhọrọ nri nri atọ ị nwere ike ịhọrọ na nri dị ọkụ na ọ drinksụ lightụ ka a ga-enye oche gị n ’oche ụgbọ oloko Trenitalia.
Tiketi Treintalia Azụmaahịa:
The Trenitalia Ahịa tiketi ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnụ ụtọ uru niile anyị dere n'elu n'agbanyeghị, Ndị njem nke Trenitalia Business Premier na-erite uru site na ọtụtụ akpa akpa, oche ergonomic nke oche dị mma, ogologo ulo, atọ nri nhọrọ ịhọrọ site na. Ọzọkwa ị nwere mgbidi maka nzuzo na ebe dị jụụ na Azụmaahịa ahọpụtara ebe ụgbọ oloko Trenitalia.
Tiketi Treintalia Onye isi:
The Trenitalia Executive tiketi ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnụ ụtọ uru niile akpọrọ aha na mgbakwunye na mgbakwunye ergonomic na-anọdụ ala akpụkpọ anụ iji doo ha isi ma nwee ọ comfortụ n'echiche nke Italia..
Enwere ndenye aha Trenitaliation?
Ha bụ Pass maka Italy, mana a na-atụ aro ya dịka nhọrọ dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụ njem njem 14 ụbọchị, ndenye aha na-enye ohere iji ụgbọ oloko na-achọ njem Italy. Enwere 3 Ọ gafere ọkwa dị: Easy, Nkasi Obi, na Executive ma ị nwere ike ịhọrọ ọnụọgụ nke njem ndị na-esite 3 ka 10 ma họrọ ụdị ụgbọ oloko ahụ site na Frecce na-agba ọsọ ọsọ ruo intercity na EuroCity.
Pass ga dị n'ụdị akwụkwọ, ọ ga-etinyere ya n'ime 11 ọnwa site n'ụbọchị ịzụta.
Ogologo oge tupu ọpụpụ nke Trenitalia rute?
Iji nweta ọzụzụ Trenitalia gị ma nọrọzie n'oge, ụzọ ụgbọ oloko na-atụ aro ịbịarute opekata mpe 30 Nkeji oge tupu ụgbọ oloko gị apụọ. N'ezie anyị na Zọpụta A Train, kwenyere na oge zuru ezu ma ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ụlọ ahịa ndị ahụ ma nweta ihe ndị ahụ ịchọrọ maka ha njem ụgbọ oloko ka ọ bụrụ nke ọma.
Gịnị bụ oge ụgbọ oloko Trenitalia?
Nke a bụ a siri ike ajụjụ ma onye na Zọpụta A Train nwere ike ịza na zuru na ezigbo oge. Na nkọwa zuru ezu gaa n'ụlọ obibi anyị, pịnye mbido n ’ụzọ njem gị na Italytali, you nwere ike ịchọta ihe kachasị zie ezi Trenitalia usoro nhazi oge enwere. Trenitalia ụgbọ oloko na-agba ọsọ n'oge 6 onwem na 11 na mgbede site na Milan ruo Bologna, dokwuo anya ọtụtụ n'ime Trenitalia ụgbọ oloko na-agba ọsọ ruo mbubreyo mgbede na a ụgbọ okporo na-apụ ọ bụla ọkara otu awa ma ọ bụ otú.
Kedu ụlọ ọrụ Trenitalia na-eje?
Trenitalia kpuchie Italytali niile, agbanyeghị isi ọdụ mba dị: Milan, Rome, Venice, Naples, Turin, Bologna, Geneva, Florence, na Verona. Enwere 11 mba ofesi: 5 Traingbọ okporo ígwè Trenitalia na Switzerland na 6 ọdụ ụgbọ mmiri dị na France na ndị ọzọ ole na ole n’Austria na Germany na Croatia. Yabụ n'ụzọ doro anya na ị nwere ike ị ga-enwe nkasi obi na ngwa ngwa ịga njem site na European mara mma ma nwee mmasị na echiche ndị Itali na-enweghị efu ihe ọ bụla!
Ebe a na-anọ ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na Milan dị n'ọdụ ụgbọ ala Piazza Duca d'Aosta. Gbọ okporo ígwè ahụ na-adọrọ mmasị ma bụrụ nke jupụtara na mbara igwe. Ya mere, ka ị na-eche ịbanye ụgbọ okporo ígwè Trenitalia ị nwere ike ịga ije ma nwee ike ịchọta ihe osise dị egwu.
Rome Termini bụ otu n’ime ọdụ ụgbọ oloko kacha ibu na Europe. Ọ dị n'akụkụ mmiri ịsa ahụ nke Diocletian na Rome oge ochie. Isi n'ọnụ ụzọ ọdụ ya sitere na Piazza dei Cinquecento. Enwere 29 ebe a na-ahụ maka ọge ụzọ na ọdụ ụgbọ oloko Trenitalia dị n'ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ oloko ahụ.
Ọdụ ụgbọ oloko Florence, Santa Maria Novella, bụ ụzọ dị mkpachapụ anya site na Duomo na nnukwu ebe nkiri n'obodo Old Florence. A na-akpọ ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na ụka Santa Maria Novella n'akụkụ ọnụ ụzọ ya. Ya mere, ị nwere ike zuo ohi oge ole na ole mara mma na Old Old, tupu ịga n'ihu na gị njem na-esote na .tali.
Naples ọnụ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo Obodo Ochie. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime ụfọdụ njem njem ụbọchị site na Naples gaa Pompeii ma ọ bụ Sorrento, mgbe ahụ ị ga - akwụsị n'ụgbọ okporo ígwè Naples maka njem ụgbọ oloko gị.
Ọ bụrụ n ’ijide n’aka nke ụgbọ oloko ịhọrọ n’ime obodo ị na-eleta, anyị mere saịtị anyị All Stations ka imirikiti nnukwu obodo ndị ahụ, Yabụ na algọridim anyị ga-ahọtara gị ọdụ ụgbọelu dị mma ịpụ site na ibute.
Kedu ihe m ga-akpọrọ m na Trenitalia?
N'otu aka ahụ dị mkpa bụ na-ewetara onwe gị na Trenitalia njem dị oké mkpa. N'elu ya hụ na ịnwere akwụkwọ njem Trenitalia gị na ekwentị ma ọ bụ edepụtara ya na akwụkwọ ikike ngafe bụ nke kwesịrị. ọ dị mma ịnwe mkpuchi mkpuchi njem.
Companylọ ọrụ nwere Trenitalia?
Trenitalia bu nke ndi ochichi Italy ma so na FS Italiane Group.
Trenitalia Ajụjụ maka Olee ebe m ga-eso Trenitalia?
Mpaghara, ụgbọ oloko obodo na mba ofesi, Trenitalia ụgbọ oloko nwere ike ị na-ebe ọ bụla na Italy na họrọ mba ndị nwere ókè-ala na Italy. Ọmụmaatụ, nke nwere ụgbọ oloko dị elu nke Trenitalia ị nwere ike ịga France na Switzerland.
Kedu usoro ịbanye na Trenitalia?
Ibubata tiketi ụgbọ oloko na ịbanye na Trenitalia adịbeghị mfe. Nwere ike ịzụta tiketi Trenitalia gị na nkeji ikpeazụ na ntanetị wee ruo 1 elekere tupu njem nke ụgbọ oloko ahụ. Maka ịbanye, ihe niile ị chọrọ bụ paspọtụ na-ewetara ndị PNR koodu (6-koodu nọmba). Iji dokwuo anya, a na-ezitere gị koodu PNR na email nkwenye ntinye akwụkwọ na e-tiketi. Donkwesighi idepụta ụgbọ oloko tupu oge a n'ihi na ọ dị na mkpanaka gị wee tinye ya na email nkwenye, onye na-ahụ maka ụgbọ oloko nwekwara ike nyochaa aha gị na tiketi na ọnọdụ kachasị njọ.
Gịnị ọrụ na Trenitalia?
Insgbọ okporo ígwè Trenitalia nwere ebe a na-ahụ anya ndị ọfeụ barụ cafe-raara nye nke a drinksụrụma na obere nri. Nchịkọta nhọrọ gụnyere sandwiches, chọkọleti chọkọleti, snacks, chọkọleti chọkọleti, kọfị, chọkoletị dị ọkụ, na tii ma ị ga - eri ihe ma drinkụọ ihe ọ inụ inụ n'ụgbọ okporo ígwè a ụlọ oriri na ọ whatụ orụ ma ọ bụ were ihe ị zụtara azụ n'oche gị. Ọ bụrụ na ị na-eme njem na Azụmaahịa, Ebere, ma ọ bụ mbụ na klas ị nwere ike họrọ a free welcome ọ drinkụ fromụ si otu nhọrọ nke 9 ihe ọ drinksụ drinksụ dị na ụtọ, savory, or a gluten-free snack. On all Trenitalia trains, enwere oghere dị n'akụkụ oche gị.
Achọrịrị Trenitalia Ajụjụ Kasị Elu – Ekwesịrị m ibido oche na Trenitalia?
Mgbe ị debere tiketi Trenitalia, A ga-enyefe gị oche oche na akpaghị aka, ịnweghị ike idobe oche pụrụ iche mgbe ị na-edebe ndoputa ahụ. Ọ bụrụ na enwere oche efu mgbe ịnọ n'ụgbọ okporo ígwè, ahapụla gị ka ị na-agagharị, gbanwee oche, ma nwee oghere di iche.
Enwere ikuku ịntanetị n'ime Trenitalia?
Mgbe ịzụrụ Trenitalia tiketi gị tupu oge eruo, ị pụrụ ịnụ ụtọ Nnọọ ịntanetị WiFi na-akwụghị ụgwọ on all Trenitalia frecciarossa type trains and classes.
Na ngwụcha, ọ buru na i rute ebe a, ị maara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgbọ oloko Trenitalia ma jikere ịzụrụ tiketi Trenitalia SaveATrain.com.
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml ma inwere ike igbanwe ya / nl ka / nl ma obu fr na otutu asusu.